HTC One M7 သည် Android 5.1 ကို Google နှင့် HTC အတွက်ကျေးဇူးတင်မည်မဟုတ်ပါ။ | Androidsis
HTC One M7 သည် Android 5.1 ကို Google နှင့် HTC အတွက်ကျေးဇူးတင်မည်မဟုတ်ပါ။
Alfonso က de Frutos | | HTC က
ထိုအချိန်တွင် HTC က၎င်းကိုပထမ ဦး ဆုံးကြေငြာခဲ့သည် HTC One M7 သည် Android 5.0 ရရှိလိမ့်မည် ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း။ ထိုသူတို့သည်လည်းစကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းဘက်ထရီကိုယခင်ထက်လျော့နည်းစေသည်။
ယခု HTC ဒုဒုဥက္ကPresident္ဌ Mo Versi မှတစ်ဆင့်ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူက၎င်းကိုကြေငြာခဲ့သည် HTC One M7 သည် Android Lollipop5ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။၁။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Google Play Edition မော်ဒယ်ရှိသောကြောင်လေးကောင်သည် Google operating system ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တရားခံသည် Google ဖြစ်သော်လည်း HTC သည် HTC One M7 အသုံးပြုသူများကိုသောင်တင်နေစေပါသည်
ထိုသို့မှန်ပေမယ့် ကျနော်တို့အမြဲတမ်းချက်ပြုတ် ROMs ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်သည် HTC One M7 နှင့်အတူကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်သုံးစွဲသူများခံစားနေရသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သူတို့သည်မူလ HTC One ကိုအသုံးပြုသူများကိုဤနည်းဖြင့်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောက်ချောက်ချောက်ချခဲ့သည်။
အိုကေ၊ HTC သည်၎င်း၏ယခင် flagship ကို ၂ နှစ်နီးပါးအထိ update လုပ်ထားသည်မှာမှန်ပါသည်၊ မူအရမူ၎င်းတို့သည်အများဆုံး ၁၈ လအထိပံ့ပိုးမှုပေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း Android 5.1 ၏တိုးတက်မှုများသည်ထူးခြားသည်ထက်ကျွန်ုပ်သည်အရသာမကောင်းသောဟာသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည့်အခါသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်သည်.
Mo Versi သည်သူ၏တွစ်တာအကောင့်တွင်အခြားသတင်းစကားတစ်ခုတင်ရန်အချိန်မကြာပါ သူတို့နောက်ဆုံးတော့ One M7 ကို update လုပ်မယ်သို့သော်၎င်းသည်အခြားအရာများထက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီမံပုံနှင့် ပို၍ တူသည်။
El HTC One M7 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသော terminal ဖြစ်သည် ဒီဇိုင်းနှင့်ချော၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ အလင်းရောင်နည်းသောinရိယာများ၌၎င်း၏ဓာတ်ပုံများသည်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည့်အလွန်မှိန်သောအလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံသောအလင်းအခြေအနေများတွင်၎င်း၏ကင်မရာကိုရေတွက်ခြင်းမရှိဘဲ high-end အင်္ဂါရပ်များရှိသဖြင့်၎င်းသည်ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းထက်ပိုသည်။ Android 5.1 ။
ဘယ်သူ့အမှားလဲ ကျိန်းသေ Google ကနေ။ Mountain Viewers မှနေရာတိုင်းတွင်ပြproblemsနာများရှိသည့်နှစ်စဉ်မွမ်းမံမှုများနှင့်မပြီးဆုံးသေးသော system update ကိုပြင်ဆင်ရန်လအနည်းငယ်တိုင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများပြုလုပ်ပေးသည်။
ဘာဖြစ်တာလဲ, နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏ဆိပ်ကမ်းများကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်သည် Mountain View မှလူကြီးလူကောင်းများသည်သူတို့၏ဆိုးဝါးသောပြောင်းလဲခြင်းမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဝါကြွားနိုင်မည်လော။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါအမြစ်များ၏အဓိကငြင်းပယ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါ့ချစ်လှစွာသောအတွက်အဲဒီအချိန်ကကြိုးစားခဲ့ပြီးသား HTC One ကို ပြီးတော့အဲဒါကိုအလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်နဲ့စက္ကူအလေးချိန်ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကယ်လိုရီဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုတွေ့တော့ငါဘက်ထရီတွေထည့်သွင်းတော့မှာကိုကြောက်တယ်။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ငါရှင်းပြမယ့်လူသစ်တွေအတွက်သင်ခန်းစာတွေကိုစထုတ်ပါမယ် HTC One M7 ကို root လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံး ROM များကို install လုပ်ပါ ဒီ Terminal မှာရရှိနိုင်တဲ့အချက်အလက်များကတော့ Google 5.1 နှင့် update ပြုလုပ်ခြင်းပေါ်လစီသည် Android 5110 မှာမရှိတော့ဘူး။ (သို့) ကျွန်ုပ်၏ Nokia XNUMX ကိုနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်၍ သုံး ဦး မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One M7 သည် Android 5.1 ကို Google နှင့် HTC အတွက်ကျေးဇူးတင်မည်မဟုတ်ပါ။
သူတို့ကလူတွေကိုနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်တွေကို ၀ ယ်စေချင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားဘယ်လိုသတိထားမိလဲ။ အရင်မော်ဒယ်တွေကိုထောက်ခံမှုမရှိဘဲထားခဲ့တာ၊
Carlito Brigante ဟုသူကပြောသည်
ROM တစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းသည်အလွန်အလွန်လိုအပ်ပြီးအလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။ ငါ lollipop ကို LGG2 မှာလပေါင်းများစွာသုံးနေခဲ့တယ်
Carlito Brigante အားပြန်ပြောပါ
အဲလ်ဘတ်တို quintero ဟုသူကပြောသည်
မင်းရည်းစားဟောင်းရည်းစားဟောင်းလိုအသံရနေတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ androidsis မှာသင်ဘယ်လို root လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာပါ
ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများဖြင့်သင်သည် Justin Bieber ၏ပရိသတ်များစွာကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမျိုးမိုက်မဲတဲ့အရာတွေအများကြီးတင်ဖို့မင်းကိုမလိုက်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။
Alberto Quintero အားစာပြန်ပါ
Alfonso က de Frutos ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ပါတယ်ငါ jilted ရည်းစား! Android 600 ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် terminal တစ်ခုတွင်ယူရို ၆၀၀ ကျန်ခဲ့သည့်ရည်းစားတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်နေကုန်မထားနိုင်ပါ
ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျမတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသင်ခန်းစာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ အဲဒါကငါလိုက်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ဆောင်းပါးမှာပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါဟာဒီအရာတွေအတွက်လူရှုပ်နေပြီးငါ့ဖုန်းကိုအားကုန်သွားပြီ (ပြန်ဖွင့်တယ်) , ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ငါ ထပ်မံ၍ ပြန်လည်စတင်မည်) ထို့ကြောင့်ထိုခမ်းနားသောသင်ခန်းစာကိုရေးသားသူ Francisco Ruiz ကကျွန်ုပ်သည်မှားယွင်းသောခြေလှမ်းများကိုလှမ်းခဲ့ဖူးကြောင်းအတည်ပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကြိုးစားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာအကြောင်းအရာ ID IDEA မရှိသူများအတွက်သင်ခန်းစာများပြုလုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုစစ်ဆေးပြီးသည့်နောက်၊ မတူညီသော ROM များကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေအတွက်ငါတို့နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးလို့ငါမျှော်လင့်မိတယ်၊ ငါရေးထားတာတွေကိုပဲရှောင်ရမယ်။ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ Justin Bieber ပန်ကာကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့သောဝက်ဆိုက်တစ်ခု ရှိ၍ ၎င်းတို့သည်ကြောင်၏ရုပ်ပုံများပါသောဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
Alfonso de Frutos သို့ပြန်သွားပါ
အမှားတစ်ခုကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသာလျှင်မြန်မြန်နောက်ကျမှဒေဝါလီခံရလိမ့်မယ်၊ ပိုဆိုးတာကဆိုးရွားသွားပြီ၊ တည်ငြိမ်တဲ့အနာဂတ်မရှိဘူး၊ m9 ဒီဇိုင်းအတွက်ဝေဖန်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒီ m8 မှာစတုန်းကအမှားတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းငှါဘာမျှမပြုကြ။ ကျွန်ုပ်သည် Samsung ၏ဝါသနာရှင်မဟုတ်သော်လည်း s6 ကို htc တစ်ခုမှ ၀ ယ်လိုသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏နောက်ထပ်ဖုန်းရှိမည့် z4 သို့မဟုတ် lg g4 ကိုစောင့်ဆိုင်းမည်။
Alfonso, Windows Phone ကိုစမ်းသုံးကြည့်တာထက်ပိုပြီးအကြံပေးချင်တယ်။ Android user တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းငြင်းမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကကျွန်တော့်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ operating system တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် low-medium, high-range terminal ကိုဖြစ်စေ update များ၏သက်တမ်းအတွင်းသင့်ကိုချန်မထားပါဘူး။ ငါသိသည် OS သည်အစိမ်းရောင်ရှိသော်လည်းလယ်ပြင်သို့မဟုတ်အလယ်သို့ထွက်ရန် WP ဖြင့်မိုဘိုင်းကိုဝယ်လျှင်ပင်။ အမှန်တရားကတော့သင်အံ့အားသင့်စွာအံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။ 🙂ငန်သောဆား။
ငါမှာ htc one s ရှိတယ်၊ သူတို့ကပထမနှစ်ကိုမရပ်တော့ဘူး။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကရောင်းတော့မယ်။
Enrique လုံးဝမှန်သည်။ ငါ့မှာ lumia 920 ရှိတယ်၊ ပထမဆုံး wp8 (မော်ဒယ်လ်က ၃ နှစ်နီးပါးရှိတယ်ထင်တယ်) နွေရာသီ - ဆောင်း ဦး ရာသီမှာ wm3 ကို update လုပ်မယ်။ ငါ android ကနေ Huawei ascend p10 ကနေလာတာ။ bendgate၊ gps ပြproblemsနာတွေနဲ့ dead pixels တွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါ့ရည်းစားက2နဲ့အရမ်းပျော်တာကြောင့်ငါ wp ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုပြန်လည်စတင်တာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ applications တွေအများကြီးပိုများလာတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ app တွေကတော့ Snapchat မဟုတ်ဘဲငါမသုံးတဲ့ကိရိယာတွေပဲ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ wp သည် android ထက်ပိုမိုလျင်မြန်သော်လည်း၊ ဂူးဂဲလ်နှင့်တီထွင်သူများကခံစားခဲ့ရသောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးမထားပါ။
Flop Rocket၊ သင်မလွတ်နိုင်သည့် Indie အာကာသယာဉ်ဂိမ်း
Stormblades, Subway Surfers ၏ဖန်တီးသူများထံမှသင်၏ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက်ပါ